Korea: Zavatra maro mety hanaitra anao any Amerika Avaratra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Mey 2009 19:45 GMT
Namoaka hafatra mavesa-danja ny mpikirakira aterineto iray momba ireo zavatra 22 manaitra avy hatrany rahal’ho any Etazonia. Mahaliana ihany ny mahita hoe nahona ireo zavatra izay heverina no voajanahary ao anatina firenena iray no manjary toa mahaliana sy manan-danja any an-kafa any.
1.Ireo làlam-be migodana mitandahatra.
Eny anelanelan'ireo tsipika fotsy, misy faritra navoitra araka ny ahitànao azy etsy ambony […] Nanontany tena aho aloha hoe inona ireny … Ireo mponina autochtonei no nilaza tamiko fa « Tsara ireny indrindra raha sendra resin-tory eo am-pamiliana fiara. Raha manitsaka ilay tsipikany fiaranao, miteraka feo sy hovitrovitra iny ary dia izay no manaitra anao ». Nahazendana ahy izany. Lafo ny fametrahana azy nefa izany ihany koa no nahitako lafiny iray amin'ny hoe firenena mandroso.
2. Fiara vita koreana
Taorian'ny nahatongavako teo amin'ny seranam-piaramanidina, dia fiara nofaina no nivezivezeko. Raha fitsidihana voalohany ao Amerika avaratra no ataonao, dia inoana fa ho faly tokoa ianao mahita fiara vita koreana vitsivitsy. Nefa,ny maro dia fiara vita avy any Japana. Misedra olana ny orinasa mpanao fiara amerikana teo aloha kely teo ary tsy maintsy ho antony izay mahamaro ireo fiara vita avy any Japana.
3. ireo Moto mikambana.
[…] Hafahafa be ny mahita moto roa ao anaty zotran-dàlana iray.
4. Vondrona mpitaingina moto – hippies ? Raha sendra tsy maintsy handeha lalan-davitra amin'ny fiara ianao dia hifanena matetika amina vondrona mpitaongina moto maromaro. Mampitamberina tsy nahy fahatsiarovana mampihoron-koditra ireny sary anaty sarimihetsika ireny izany. Mazava hoa azy fa taitra sy velon'ahiahy ianao. Nefa dia tsy olona atahorana akory ry zareo.
5. Ireo mpanao Auto-stop.
Tsy azo sainina ny hiaina ara-dàlana tsy misy fiara ao Amerika izany. Izany angamba no isan'ny antony ahitanao tsindraindray mpanao auto-stop eny amin'ireny lalam-be mivoaka ny tanana sy ny arabe ireny. Indraindray raha sendra mijanona fotsiny ny fiaranao, tonga ry zareo mandondona eo amin'ny fitaratra. Natahotra aho aloha ary dia tsy sahy nitondra. Raha tratr'izany koa ianao dia tsy maintsy hatahotrar. Nanontany ireo namako amerikana aho ary maro koa ireo no tsy mitondra. Tsy misy ireny mpanao auto-stop ireny any Korea.
6. Ours sy cerf.
Matetika aho no mahita hafatra amin'ny aterineto milaza fa misy biby maty eny amin'ny lalam-be eny. Namaky fifanakalozan-kevitry ny samy mpikirakira aterineto aho momba ny fihetsika tokony hatao raha sendra mahadona biby, tokony hijanona ve sa tsia? Ireo biby mipoitra tampoka avy any sy ny fiara mijanona tampoka dia samy mety hitera-doza avokoa. Angamba ny fitondran-tena tokony ho raisina dia ny mandeha mora. Aty da matetika no ahitana ny takela-by milaza toeranaahitana biby betsaka. Nifanena tamina cerf iray koa aho izay tena goavana tokoa. Nilaza ny Amerikana fa raha mandona cerf na ours iray ny fiara entinao dia korontam-by sisa tavela aminy noho ny haben'izy ireny. Rehefa mahita ireny takela-by ireny ianao dia tokony hitandrina mafy eo ampamiliana.
7. Jiro mirehitra mandritry ny fotoana maha-be zavona.
Rehefa manjavona iny ny andro, dia mandrehitra ny jirony araka ny efa nampiomanana azy ny olona. Ataony koa izany na dia tsy be zavona loatra aza ny andro. Tamin'ny voalohany, noheveriko ho nisy filazana loza nitranga[alerte], ady ohatra.
8. Ny Finday.
Hatramin'ny nielezan'ny vaovao momba ny voka-dratsin'ny onja [ampiasaina amin'ny finday],dia misy seho toy ny sary avoaka matetika amin'ny fahitalavitra. Toy ny amin'ny sary, ahatak'izy ireo ny finday ary dia sady miteny izy no mijery ilay finday. Marina mafy, tena matahotra mihitsy ny amin'ny fahasalamany ry zareo.
9. Olon-droa mifanoroka.
Matetika no ahitako ny toy izany ao amin'ny tanana ipetrahako ao California. Tsaroako ny fandaharana iray tao amin'ny fahitalavitra koreana, Misooda (resaka ifanatrehana nifanaovana tamina teratany vahiny).Nilaza izy ireo fa manafintohina azy ireo ny mahita Koreana vavy miara-mandeha any amin'ireny toeram-pidiovana natao ho an'ny daholobe ireny, na miara-mamindra ka manao bras dessu-dessous na ihany koa mifampitantana. Aminay anefa dia mariky ny finamanana tsotra izao izany. Saingy rehefa mahita olon-droa mifanoroka aho dia mahatsiaro ho vaelingelina kely ihany.[…]
10. Tsy misy tsaky atolotra miaraka amin'ny toaka izany. Haintsika rehetra tsara. Fa rehefa handeha mba hisotrosotro iny ianareo ary tonga irery avy any izy, gaga kely ihany ianareo. Zavatra iray hanaitra anareo ihany koa ny hoe tsy misotro mihitsy ry zalahy mandritry ny herinandro fa tonga dia mody any an-trano rehefa avy miasa.
11. Ireo vehivavy mifoka sigara
[…] Efa tsy firesatsika intsony ny momba ny vehivavy mifoka sigara. Saingy dia tena mbola misy ireo vehivavy sahisahy mbola mifoka hatrany ampidirna ny toeram-piasany na any anaty toerana be olona mifamezivezy.
12. Ireo fety isaky ny zoma any ampiasana.
Sady zendana aho tamin'zany no saro-piaro koa. Ny zoma hariva talohan'ny nanombohana ny famaranana ny herinandro dia nisotrosotro narahana amuse-gueules ireo mpiara-miasa. Mazava loatra, misy ireo toeram-piasana tsy manao toy izany. Fa ny ankamaroany dia manana io fetin'ny zoma hariva io daholo. Niasa mafy ianao nandritra ny herinandro ary dia mba miala vonkina amin'ny fisotroana sy ny fihinanana. Araka ny ahitanao azy eo amin'ny sary, be ny safidy amin'ny zava-pisotro sy ny amuse-gueules. Ambadik'izay kosa, dia tsy mandeha miara-misakafo toy ny fanaontsika ry zareo…
13. Rehefa fotoana be rivotra, tazana ireny vestes vita tamin'ny hoditra ireny
Maina ny teo-tany ao Californie ary tsara foana ny andro mandritry ny taona. Mifanohitra amin'ny any Korea izay ahitantsika teotr'andro mafana sy mangatsiaka, tsara foana ny andro aty. Indraindray mba midina kely ihany ny hafanana. Raha misy rivotra ka somary mangatsiaka, toy ny filazan'ny olon-drehetra azy, dia manao akanjo mafana daholo izy rehetra na vestes vita amin'ny hoditra. Dia sady mangovingovitra ry zareo no miteny hoe «mangatsiaka tafahoatra». Tany ampiandohana, dia gaga tamin'ireny akanjo hoditra ireny aho.
14. Fandrehofana sy mpandeha an-tongotra tsy manara-dalana
Nambara tamintsika fa hoe ny Amerikana dia mpanaraka ny lalanan'ny fifamoivoizana ary manaiky ny lalana. Dia nino izany koa aho…^^^^^^^
Indray mandeha, nahita lehilahy iray izay noheveriko fa ao tsara aho, nadrora sy nanary ny siligaomany [chewing-gum], ary dia nanapaka ny arabe ihany na dia mena aza ny jiro mpandamina. […]
15. Mikajy ny Kaloria any anaty fivarotana enta-madinika.
Fahita matetika any anaty fivarotana enta-madinika izany […] Rehefa miantsena ny olona, dia jeren'izy ireo tsra ny kaloria entin'ny zavatra novidiany – Heveriko fa tsy ny olona rehetra no manao izany. Ny sasany mampisa milina kely fikajiana mba hanaovana ny fanambarana Ny sasany mampisa milina kely fikajiana mba hanaovana ny fanambarana Ny sasany mampiasa milina kely fikajiana mba hanaovana ny fanambarana. Raha ny fahitna azy dia ampitahainy amin'ny kaloria tokony horaisina isan'andro nomen'ny toro-lalana izany.[…]
16. Indray migoka ?
Eny anilan'ireny fantsakana ireny, misy zinga vita tamin'ny taratasy toy ny hita eo ankavia. Mbola nisy hafa ihany koa hitako, misy fanamarihana hoe “goka” tany Amerika (eo afovoan'ny sary). Kely kokoa noho izay ananantsika any Korea izy ireny. Lehibe loatra ho an'ny indray migoka ilay izy.
17. Singa XXL
Lehibe ny vatako ka dia mahatonga ahy handray ny tolotra XXL ao amin'ny Burger King ao Korea. Nefa aty Amerika, ireo tolotra Burger King dia tena mitafotafo tokoa. Maneho izany fahasamihafana izany ny sary. Tapitro foana hatramin'izay ny hamburgers-ko. Fa tsy mahavita mamarana azy kosa aho aty. Toy izany koa ny pizzas.
Reko fa manasa ireo namany Koreana ho any ireo Amerikana. Toerana iray ahafahanao mitifitra araka ny danin'ny kibonao izy io. Raha nanasa ahy hitifitra ireo namako, dia noheveriko fa hoe lalao any naty trano fisotroana ilay izy. Saingy, hay ka tena club de tir ity izy. […]
19. Trano be zara raha misy fanaka
Isaky ny mitsidika trano iray aho aty, dia zendana amin'ny habeny sy fahalalàhany. Raha miohatra amin'ny habetsaky ny ankohonako, dia tena malalaka toka izy ireny ary amin'ny ankapobeny dia misy rihana roa. […] Tsy dia misy fanaka ireny trano be ireny. Rindrina sy placards ary talantalana maro eny rehetra eny. Mora ny vidiny raha oharina amin'ny any Korea. Ho gaga ianao amin'ny vidiny.[…]
24.Fahasamihafana ara-kolotsaina raha ny fitafy maivana ‘mampiseho tratra’ no jerena. Any amerika avaratra tahaka ny any amin'ireo firenena Eropeana sasany, ny mampideraderany mampiseho tratra dia toa voajanahary [mandeha ho azy] raha manafintohina kosa any Korea. Mazava loatra fa misy tsy fitoviam-pijery maro ao. Raha hoe tokony hojerena amin'ny lafiny mahamenatra sy mahavaka saina izany, dia noraisina kosa ho fananana ny maha-izy azy sy fahatokisan-tena, toa malalaka kokoa noho ny any Korea ry zareo.Saingy tsy dia toy izany loatra kosa ry zareo miohatra amin'ny any Korea raha resaka sexe. Mbola maro ny fiankaviana mpandala fatratra ny nentin-drazany noho ny any amintsika.
25. Fitafiana ahazoana aina tsara, tsy misy ankosotra, hoditra miboridana…. […] Ny ankamaroany tsy mitondra costumes. Mahazatra ireo lehilahy ny manao lobaka fotsiny amin'izao na T-Shirt, jeans na pataloha fitondra manao fanatanjahanten… Ny vehivavy koa dia mitondra fitafy fitondra manao fanatanjahantena. Gaga aho fa ny ankamaroany dia tsy misy mihosotrosotra izany.
26. Fotoana maro no lany amin'ny làlana manasaraka ny fonenana sy ny toeram-piasana, hiova asa ve? Isan'ny resaka ifanakalozan'ireo mponina autochtones izany. « Nifindra fonenana aho, lavitra loatra amin'ny asako, mihevitra ny hitady iray hafa aho » Mifindra imbetsaka izahay nefa kosa tsy mihevitra mihitsy ny hiova asa.… Misy mihitsy aza ny ‘olon-droa ho an'ny faran'ny herinandro monja’ ( izay miasa amina tanàna samihafa ary tsy mifankahita raha tsy ny faran'ny herinandro).